လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏တန်ခိုး – Masso Myanmar
Posted on 16 April, 2017 23 September, 2017 by vanda
သင်သည်အဘယ်သို့ပြန်သင်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တွေ, တီဗီစီးရီးသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်လာမယ့်ထားမည်လား အကောင်းတစ်ဦးပုံပြင်။ ထုတ်ဝေသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကဤသိရန်နှင့်ကြီးမားသောပရိတ်သတ်များဆွဲဇာတ်လမ်း၏တန်ခိုးကို အသုံးပြု. မှာသခင်ဖြစ်လာကြပါပြီ။
ကြော်ငြာဈေးကွက်ထဲမှာဇာတ်လမ်းကလူကပေးဆောင်ကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်ပရိုမိုးရှင်းနှင့်အတူမြင်ချင်ကြားဖြတ်။ သို့သျောလညျး, လူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်ရှိလူများကိုတွေ့မြင်ချင်သော content တွေကိုဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကောင်းတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်ပုံပြင်ပြောပြခြင်းအားဖြင့်ပရိသတ်ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ကောင်းတစ်ဦးပုံပြင်စေသည်?
လူများတို့သည်ကြော်ငြာတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့၏ခံစားဘို့ကြော်ငြာများကိုကြည့်ဖို့ရှေးခယျြတအချိန် – ဇာတ်လမ်း၏တနျခိုးသုတေသနငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မိုက်ကယ် Coolsen နဲ့ကျွန်မ Super Bowl ကြော်ငြာ၏နှစ်နှစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကျနော်တို့ကြော်ငြာ ratings ရွေးကောက်ပွဲများ၏ထိပ်၌ဘတ်ဇ်နှင့်ပြီးဆုံးရန်မဲတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားဆွဲငင်သောသူတို့, အရှိဆုံးကြိုက်တယ်ခဲ့ပြီးသောကြော်ငြာတွေကိုသိချင်တယ်။
အရေးယူဆောင်ရွက်မှု, ထှတျအထိပျ, ကျသွားအရေးယူမှုနှင့်သန်နိဋ်ဌာနျ (denouement) မြင့်တက်, မိတ်ဆက် (Exposition): ကျနော်တို့ Freytag ရဲ့ပိရမစ်, ငါးအစိတ်အပိုင်းများသို့ပုံပြင်ဖြိုဖျက်သောသီအိုရီအပေါ်အခြေခံပြီးကြော်ငြာ coded ။ ရှိတ်စပီးယားကသူ့ငါးလုပ်ရပ်ပြဇာတ်များအတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပရိသတ်ကိုဆွဲရန်ဤပုံပြင်ကိုဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြည့်စုံပုံပြင် (အားလုံးငါးလုပ်ရပ်များ) ပြောပြသောကြော်ငြာတွေလူကြိုက်အများဆုံးခဲ့ကြသည်နှင့်စားသုံးသူ ratings ရွေးကောက်ပွဲ၏အောက်ဆုံးမှာကြော်ငြာတွေပုံပြင် (ထက်နည်းငါးလုပ်ရပ်များ) ၏လျော့နည်းပြောသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ပုံသေနည်း – အားလုံးငါးအစိတ်အပိုင်းများကိုထားရှိခြင်းသည်သိသိသာသာကို arc သို့မဟုတ်ကြံစည်မှုဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါဟာသင်လူမှုမီဒီယာမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အတူတူဇာတ်လမ်းပုံသေနည်းဖြစ်ပါတယ်။
social media မကြာခဏ, တသမတ်တည်း, အရည်အသွေးအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။36 ကြော်ငြာတွေဆက်တိုက်နှင့်အတူနှစ်စဉ်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုအမှတ်တံဆိပ်မန်နေဂျာမကြာခဏသူတို့ရဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ် post အဘယျသို့အံ့သြ left နေကြသည်။ ပိုကြီးတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပုံပြင်ထူထောင်သင်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာအခြေစိုက်စခန်းပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီလူမှုရေး post ကိုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုခြုံငုံဇာတ်လမ်းကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်တိုးတက်တဲ့ Mini-မျြးအခနျးကွီးသို့မဟုတျဇာတ်ကောင်ကိုးကားနိုင်ပါတယ်။ ငါးလုပ်ရပ်ပုံသေနည်းကိုအောက်ပါအားဖြင့်သင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှဒရာမာနှင့်ပယောဂထည့်ပါ။
အက်ဥပဒေ 1: နိဒါန်း။ ဒါ့အပြင်ဒီ setting, နောက်ခံအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ခြင်း, Exposition ကိုခေါ်ယခင်ဖြစ်ရပ်များ, ဇာတ်ကောင်, etc ပြည်သူ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှု, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ကျောဇာတ်လမ်းအဘို့အအမှတ်တံဆိပ်ကိုဝယ်ကြလော့။ သင်သည်သင်၏လူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာအားဖြင့်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏သမိုင်း, လူများနှင့်မစ်ရှင်သို့မဟုတ်ရူပါရုံကိုမျှဝေပါသလား?
အက်ဥပဒေ 2: Rising လှုပ်ရှားမှု။ ထှတျအထိပျ – ဤအကြီးမြတ်ဆုံးအတိုးတဲ့အချက်ဆီသို့တည်ဆောက်ကြောင်းဆက်စပ်ဖြစ်စဉ်များသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာထပ်ခါထပ်ခါတူညီသောသတင်းအချက်အလက်များဆံ့ကြောင်းပြားချပ်ချပ်ပို့စ်သတိထားပါ။ ကြီးမားတဲ့အရေးယူမှုဆီသို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပျေါမှာတညျဆောကျကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ရေးသားချက်များအတွက်တာပိုကြီးရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားပါ, ထုတ်ဖေါ်သို့မဟုတ်ပရိတ်သတ်များနှင့်နောက်လိုက်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်သည်ကိုအမှတ်လှည့်နှင့်ပြန်ကြည့်လာမယ့်စောင့်ရှောက်ခြင်းတွင်စစ်ဆေးပါ။
အက်ဥပဒေ 3: ထှတျအထိပျ။ ဒါကအဓိကဇာတ်ကောင်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲသောအလှညျ့အပွောငျးဖြစ်ပါသည်။ စျေးကွက်အဘို့ဤလုပ်ရပ်စဉ်းစားရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာသင်၏လူမှုမီဒီယာအားထုတ်မှု၏အဓိကဇာတ်ကောင်ကိုဖေါ်ထုတ်။ သင့်ရဲ့ပို့စ်များကိုအမှတ်တံဆိပ်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြအာရုံစိုက်နေကြသည်သို့မဟုတ်သူတို့သည်သင်၏ဖောက်သည်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြအာရုံစိုက်နေကြသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၌သင်တို့ကိုအဖြေတစ်ခုရှာဖွေတာသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်, ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအားသာချက်များအပေါ်သို့ဆွဲအားဖြင့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကျော်လွှားတဲ့အလှညျ့အပွောငျးရောက်ရှိအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။
အက်ဥပဒေ 4: ကျဆင်းလာလှုပ်ရှားမှု။ အဆိုပါကျသွားအရေးယူစဉ်အတွင်းကွေ့ point ရဲ့အကျိုးဆက်များ သာ. ကြီးအသေးစိတျမှာဖျောပွထားပါနေကြသည်။ လူမှုမီဒီယာများတွင်သူတို့အားရလဒ်များကိုဖော်ပြ။ အတားအဆီးကိုကျော်လွှားခဲ့သည်လျှင်, အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်စားသုံးသူများအတွက်ရလဒ်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? နောက်ဆုံးအောင်ပွဲဆီသို့ညွှန်ပြသည့်အခွင့်အလမ်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်ဆိုပါက, အသေးစိတ်များစွာအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ရလဒ်။
အက်ဥပဒေ 5: ဆုံးဖြတ်ချက်။ ဤတွင်အပေါငျးတို့သဖြစ်ရပ်များဒရာမာသို့မဟုတ်ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုအဆုံးသတ်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ ပဋိပက္ခများကိုတင်းမာမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုလွှတ်ပေးရန်ဖန်တီးသောဇာတ်ကောင်များအတွက်ဖြေရှင်းနေကြသည်။ ဤတွင်လူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်ကအနိုင်ဂိုးကိုပြသသင့်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်အမှတ်တံဆိပ်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များမှာကြည့်သည်။ အစဉ်အဆက်အပြီးသင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်စွာကဘာလဲ?
Howard Gossage, 1960 ကနေနာမည်ကြီး copywriter လူတွေကိုကြော်ငြာစာမဖတ်ကြဘူးသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုကိုဖတ်ကဆိုသည်။ ဤသည်အတွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကယခုထက်ပိုသောဒါသက်ဆိုင်ပါသည်။ လူမှုမီဒီယာများတွင်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုပေး။ ပုံပြင်တွေနဲ့တူပြည်သူ့။ သင်သည်သင်၏လူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာအတွက်ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏ငါးလုပ်ရပ်များပြုကြရန်တွန်းအားပေးနေပါသလား?
Posted in လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး